Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ‘वान डे’ मान्यता पाउन नेपालसामु ठूलो चुनौती – Emountain TV
‘वान डे’ मान्यता पाउन नेपालसामु ठूलो चुनौती
काठमाडौं, २९ फागुन । विश्वकप छनोटको आफ्नो चौथो खेलमा हङकङलाई हराएसँगै नेपालले एक दिवसीय टोलीको मान्यता पाउने सम्भावनालाई बचाएको छ । तर, यो सम्भावनालाई यथार्थमा ल्याउन नेपालसामू चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो देखिन्छ ।
समुह चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग १ सय १६, दोस्रोमा स्कटल्याण्डसँग ४ विकेट र तेस्रो खेलमा अफ्गानिस्तान ६ विकेटले पराजित भएको थियो । तीन खेलमा लगातार हारेको नेपालले अन्तिम खेलमा जित हात पर्यो ।
यद्यपि, सुपर सिक्समा पर्ने सम्भावना भने समाप्त भएको छ । तर, चार वर्षका लागि एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गर्ने सम्भावना भने कायमै छ । एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गर्न समुह बीको चौथो स्थानमा रहेको नेपालले अझै प्लेअफ चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले अब प्लेअफमा समूह ए को पाँचौ स्थानमा रहेको पपुवा न्युगिनीलाई पाखा लगाउनुपर्ने छ । तुलनात्मक रुपमा नेपालभन्दा पपुवा न्यूगिनी बलियो मानिन्छ । तर, जारी प्रतियोगितामा उसले खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि नेपालले उसलाई पन्छाउन सक्ने बताउँछन् क्रिकेट खेलाडीहरु ।
समुह बीको पाचौँ स्थानमा रहेको हङकङ अब समूह एको चौथो स्थानमा रहेको नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सातौँ स्थानका लागि समेत नेपालले समुह एको नतिजाको आधारमा जित हात पार्नु पर्नेछ । जित दर्ता गरेमा नेपालले एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गर्नुका साथै आइसीसीले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत सकारात्मक हुनेछ ।
नेपालले हङकङविरुद्धको खेलको सुरुमा प्रतियोगिताभरिमै उत्कृष्ट व्याटिङ गरेको थियो । त्यसो त, जितमा बलरहरुको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण रह्यो । नेपालले हङकङविरुद्ध गरेको सुरुवाती प्रदर्शनलाई नै निरन्तरता दिन सक्ने हो भने पपुवान्युगिनीलाई पाखा लगाउन सक्छ ।
विश्व फुटबल बरियतामा नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा
युईएफए सुपर कपको उपाधि एथ्लेटिकोलाई, रियल ४–२ ले पराजित
एसियाली खेलकुद : नेपाल जापानसँग १-० ले पराजित
क्यान निलम्बन फुकुवाकाे तयारी
म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा इंग्लिस प्रिमियर लिगमा विजयी सुरुवात
नेपाली क्रिकेट टोलीको अबको यात्रा कस्तो होला ?
इंग्लिस प्रिमियर लिग : चेल्सी र टोटनह्यामको विजयी सुरुवात
१८ औं एशियाली खेलकुदको तयारी अन्तिम चरणमा
प्रिमियर लिगको उद्घाटन खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी
एन्फाको तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक
यु–१५ साफ महिला फुटबल आजदेखि सुरु हुँदै
च्याम्पियन्स कपमा रियलद्वारा रोमा २–१ ले पराजित